WOWOW Tuwaalada Wareega ee Matte Madow - Tubooyinka Jikada ugu Fiican 2021 | Tubooyinka Musqusha ee ugu Fiican | WOWOW qasabadaha
Bogga ugu weyn / accessories / Qalabka Musqusha / WOWOW Tuwaalka Wareega Wareegtada Matte Black
[Goobaha KaydintaRing Giraanta shukumaan bir ah oo gidaar ku rakiban uma baahna meel bannaan oo saaxiibtinimo leh meel yar. Naqshadda geeska wareegsan waxay ammaan u tahay carruurta inay isticmaalaan.
[180 ° Giraanta WareegaysaRing 180 ° giraanta shukulaatada oo la rogrogay oo leh dhaqe caag ah ayaa ka aamusi kara lulidda oo joogi kara xagal kasta, taas oo ku habboon in la sudho shukumaannada.
[Naqshad Casri ahFinish Dhamaystirka madoow ee soo jiidashada leh wuxuu abuuraa qaab fudud oo xarrago leh oo dhammaystira qalabka kale ee musqusha. Faraha ka hortagga iyo iska caabinta daxalka.
[Tayada SareRing Faraantiga shukumaan ee culus waxaa lagu dhisay 304 birta birta ah ee birta ah, kaas oo ka ilaaliya daxalka iyo miridhku. Qalabka birta ah ee birta ah ayaa ka dhigaya mid waara.
[Way fududahay in la rakiboMount Buurta buraashka qarsoon, derbiga korkiisa. Dhammaan qalabka wax lagu xiro waxaa lagu dari doonaa xirmada. Haddii aad u baahan tahay qofka haysta warqadda musqusha, fadlan raadi Asin: B08KDP8QYF.
Fur furyada oo soo saar filimka
1 X Giraanta Tuwaalka Madow
1 X Barashada Rakibaadda
1 X Xidhmada Qalabka (barroosin hufan, boolal siibaysa, iyo Allen wrench)
SKU: 4030801B Categories: Qalabka Musqusha, accessories Tags: matt taxane madow, minimalist casri ah